Namono olona 12 ahitana Meksikana mpizahatany 8 i Ejipta dia niala tsiny avy eo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Septambra 2015 3:42 GMT
“Indro ny fahazoan-dalana mivezivezy lazaina fa azon'ny Windows Of Egypt Tours hoan'ireo Meksikana mpizahatany,” hoy i Sarah El Sirgany (@Ssirgany) nisioka.
Olona 12, ka tafiditra amin'izany ny Meksikana mpizahatany 8 no maty rehefa notafihan'ny “voromby iray sy angidimby maro” tao amin'ny Tanihay Andrefana ny andiam-piara mitondra mpizahatany, toerana mifanakaiky amin'ny sisintany iraisana amin'i Libya. Mbola misy 10 hafa, ary betsaka kokoa ny Meksikana mpizahatany, no maratra nandritra ny fanafihana.
Niala tsiny tamin'ny fanafihana ny manampahefana ejipsiana tamin'ny filazana fa nihoatra ny faritra tsy tokony alehany ireo mpizahatany ka voatifitra tsinahy. Voatsipaka [tamim-porofo] ny filazana fa tsy nahazo fahazoan-dalana handeha ao amin'ny faritra ireo mpizahatany, rehefa nandehandeha tao amin'ny media sosialy ilay fahazoan-dalana.
Araka ny mpanao gazety Louisa Loveluck:
Lazain'ny minisitry ny raharaham-bahiny meksikana ho nisy “baomba maro natsipin'ny voromby iray sy angidimby maro ny fanafihana andiam-pizahatany ao amin'ny Tanihay Andrefan'i Ejipta.
Manampy ny mpanadihady Shadi Hamid monina ao DC:
Androany ny fahefana ejipsiana dia namono mpizahatany sy mpitari-dalana 12, miehvitra azy ireo ho ISIS, avy eo dia miampanga ny lasibatra ho diso toerana andehanana.
Ny torohay momba ny toejavatra, izay nitranga tamin'ny alina, dia mbola zary mampitsiky, raha avy amin'ny manampahefana meksikana ny ankamaroan'ny antsipirihany voalazas. Nanamarika ilay Ejipsiana Tamer El-Ghobashy :
Milaza io fa ny antsipirihan'ny famonoana mpizahatany ao Ejipta dia mbola avy amin'ny manampahefana meksikana fa tsy avy amin'ny fahefana ejipsiana
Efa tafalatsaka ao anatin'ny fiadiana amin'ny mpitolona mitam-piadiana, izay mikambana ao anatin'ny ISIS ny sasany, tao anatin'ny taona maro ny tafika ejipsiana. Olona an-jatony, ka ao anatin'izany ny mpiasan'ny fiarovana sy ny miaramila, no maty nandritra ny bemidina “iadiana amin'ny fampihorohoroana”.
Tsy manala tsiny ny famonoana mpizahatany izany, raha mitsangatsagana amin'ny toerana malaza amin'ny mpizahatany. Ary mazava ho azy raha tezitra aoka izany ny manampahefana meksikana. Manameloka ny fanafihana ny filoha meksikana Peña Nieto, ary miantso ny hanaovana famotorana.
Manameloka izay mitranga ao Ejipta ny Filoha Meksikana Peña Nieto, miantso ny hanaovana famotopotorana akaiky
Nanao antso mitovy amin'izany ny Sekreteram-Panjakana Meksikana misahana ny Raharaham-bahiny Claudia Ruiz Massieu :
Mitaky famotopotorana feno sy fanazavana feno avy amin'i Ejipta amin'izao fahafatesan'olompireneny 12 izao ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Meksikana
Nihivingivindoha tao anatin'ny tsi-finoana ny mpiserasera mahita ny fialantsiny nataon'ny governemanta ejipsiana manoloana ny toe-draharaha.
Nisioka ny mpanao gazety Bel Trew :
#Egypt tourism min says Mexican tourists army shot dead were in “unapproved” Safari.Police said their actions were “illegal”.Unbelievable
Milaza ny minisiteran'ny fizahantany ejipsiana fa tany amin'ny toerana “tsy nekena” ho fanaovana safari ireo Meksikana mpizahatany matin'ny tafika. NIlaza ny polisy fa “tsy ara-dalàna” ny zavatra nataon'ireo. Tsy mampino
Western Desert &Siwa near #Libya border-where #Egypt shot dead 12 tourists includ.Mexicans-is popular holiday spot for safaris #FYI
Tanihay Andrefana sy Siwa akaikin'i Libya nitifiran'i Ejipta ho faty mpizahatany 12 ka ao anatin'izany ny Meksikana izao no toerana fialantsasatra malaza fanaovana safari
Naneho hevitra ny Bahrainita Salma Says:
Tsy mampino! firenena iray miezaka mafy ny hamelona indray ny fizahantany no mamono mpizahatany 10 ary manao fialantsiny amin'izany. Tsy milamina ry Ejipta!
Ary ny mpanao gazety Rawya Rageh namehy tao amin'ny siokany fa :
Azo jerena fotsiny izao ho vokatry ny kolontsaina tsimatimanota tanteraka izao.
Mandritra izany fotoana izany dia lasa mampanontany tena ny Ejipsiana mpanao gazety tahaka izao ny fitifirana ireo mpizahatany :
ERITRERETO: naheno ity fanafihana kitoatoa ity isika satria vahiny ny sasantsasany amin'ireo lasibatra. Firy ny Ejipsiana maty amin'ny fomba fanafihana tahaka izao ao Sinay?
Ny fanontaniana manery ankehitriny dia hoe fa maninona no maty novonoina ny mpizahatany, ao amin'ny firenena izay mihambo ho Lamekan'ny mpizahatany.